Shiinaha Mashiinka Korantada Korantada (mataanaha) mataanaha iyo soo saareyaasha | AngelBiss
Mashiinka Mashiinka Korantada ee loo yaqaan 'AngelBiss Electric Suction Machine' (mataanaha jarjarta ah) ayaa loo isticmaalaa nuugista dareeraha kala duwan, sida malax, xaako iyo dhiig. Waa waxtar aad u leh dhakhtarka ilkaha iyo xaaladaha degdega ah iyo qolka qalliinka.Waxaa si gaar ah loogu talagalay codsiyada leh socodka joogtada ah iyo astaamaha cadaadiska, mashiinka nuugista la qaadan karo wuxuu bixiyaa hab dhakhso leh oo wax ku ool ah oo lagu nadiifiyo dhiigga, ama dareeraha kale ee caafimaadka ee daaweynta daaweynta ilkaha. Waxay leedahay laba nooc oo noocyo kala duwan ah: 25L & 30L. Awoodda weyn ee laba dhalo ayaa kaa ilaalin doonta inaad ku celceliso ficilka bamgareynta. Dhaladaasina waa mid aan biyuhu karin oo dib loo isticmaali karo. Waxay badbaadin doontaa waqti iyo kheyraad.
Mashiinka nuugista korantada wuxuu ka kooban yahay bamka cadaadiska xun, jaangooyaha cadaadiska xun, tilmaame cadaadiska xun, uruurinta qeybta weelka, biilasha lugta lugta, kiiska. Wax soo saarkuna wuxuu la kulmi karaa dhammaan noocyada isbitaalada iyo qeybaha caafimaadka ee looga baahan yahay wax ku oolnimada qalliinka caafimaadka, soo jiito shuruudaha socodka ballaaran ee qaybaha caafimaadka ee qalliinka dheecaanka malawadka leh dhoobada kala duwan si loo soo jiito. Waana qaab dhismeed taagan, qaab casri ah. Qaab dhismeedka oo dhan more waa muuqaal soo jiidasho leh oo qurux badan.Madaxda madaxa furaysa ee madaxa piston-ka ah ayaa loo qaatay cadaadis diidmo, buuq hooseeya .waana sidoo kale saliid la'aan. Qalabka aaladda antifiow ee ka hortagga badan, shaqada dayactirku waa sahlan tahay, uma baahnid inaad saliid ku darto.
Waxay sidoo kale leedahay laba nooc oo hawlgal oo kaladuwan, loogu talagalay iskudhafka buugaagta iyo baydalka ayaa loo isticmaalaa isku mar.Waa fududahay in la shaqeeyo. Habka sheygu wuxuu u shaqeeyaa waa qaabka terminal, in ka badan 25L / Min.It waxaa lagu buuxin doonaa kartoon.
1. Mashiinka nuugista korontada wuxuu ka kooban yahay bamka cadaadiska xun, jaangooyaha cadaadiska xun, tilmaame cadaadiska xun, uruurinta qeybta weelka, biilasha lugta lugta, kiiska.
2. La kulmi kara dhammaan noocyada isbitaalada iyo qeybaha caafimaadka ee looga baahan yahay wax ku oolnimada qalliinka caafimaadka, soo jiito shuruudaha socodka badan ee qaybaha caafimaadka ee qalliinka dheecaanka malawadka leh dhoobada kala duwan si loo soo jiito.
3. Qaab dhismeed toosan, qaab casri ah, muuqaal qurux badan.
4. Mashiinka laba-laabka bistooladaha madaxa lagu qaato waxaa loo qaatay cadaadis taban, buuq hooseeya.
5. Qalabka badbaadada antifiow, shaqada dayactirka waa mid fudud, uma baahnid saliid lagu daro.
6. Bedelaadda gacanta iyo baydalka ayaa isku mar la adeegsadaa, hawl fudud.
7. Marka la eego nooca iyo darajada ka hortagga naxdinta elektiska, mashiinka nuugista waxaa lagu dhex muquuriyaa qalabka I nooca iyo nooca dalabka nooca B. Habka socodku waa hawlgal isdaba joog ah, IPXO, ma aha nooca AP iyo nooca APG qalabyada guud.
8. Alaabtu waxay buuxineysaa shuruudaha IEC60601-1, IEC60601-1-2, ISO 10079-1.
30L / daqiiqo
25 L / daqiiqo
Xadka cadaadiska xun
Cadaadis taban oo kala duwanaan kara
Awoodda weel ururinta
Dalool (hawo qaadista) ≥35L / daqiiqo
Saldhigga ≥30L / daqiiqo
Saldhigga ≥25L / daqiiqo
Hore: Oximeter garaaca wadnaha
Xiga: Ogsijiin Isku-urursiga 'ANGEL-5S'
Mashiinka Nuujinta Afka Dibadda
Mashiinka Nuujinta Isbitaalka
Mashiinka Nuugista Caafimaadka
Mashiinka Nuugista Qalliinka ee Afka
Mashiinka Cadaadiska Cadaadiska
Mashiinka Nuugista Degdegga ah ee Vacuum
Mashiinka Nuugista Vacuum